N'ogbe Anyị nwere "Nzuzo na Nnukwu Ire" ịgwa gị ụlọ ọrụ nrụpụta na ndị nrụpụta | NTOKWU
Anyị nwere “Nzuzo Dị Nnukwu Nnukwu” ịgwa gị
Dịruru ụbọchị azụ mgbe afọ 2018 ebe FEELM teknụzụ bụbu ntọala, “Maka Ọzọ Pod” ka emere ka ndị mmadụ chekwaa. Inye onyinye dị mma na ahụmịhe, pọd na-esote nke FEELM teknụzụ bụ nhọrọ dị mma maka ijeri ndị ọrụ n'ụwa niile.
Site na mgbe ahụ, anyị ewerela ndị ọrụ R&D dị elu wee tinye sayensị dị ka ihe, hydromechanics, aerodynamics and thermodynamics to build a world-eduga atomization technology platform.
N'oge a, ị nwere ike ịchọta pọd mechiri emechi na FEELM seramiiki eriri igwe gburugburu ụwa. Ndị anyị na ha jikọtara ọnụ ahịa ahịa 70% na 30% n'otu n'otu na China na America. Mana anyị anaghị akwụsị ịchọpụta ihe ndị ahịa chọrọ. Kedu ihe ha chọrọ karịa? Gịnị bụ uche ha? Anyị enwere ike imeju ọchịchọ ha site na inwe ọganihu na teknụzụ?
Part 1 Gịnị ka anyị hụrụ?
Na mbido 2020, FEELM bidoro nyocha zuru ụwa ọnụ wee kpokọta ọtụtụ puku mpempe akwụkwọ azịza. Ka ọ dị ugbu a, anyị mụrụ ọtụtụ akụkọ nyocha na echiche ndị ọkachamara.
Ma anyị ruru nkwubi okwu na ịchụso ihe kachasị mkpa bụ ire ụtọ.
Kemgbe ebidoro pọdl mechiri emechi nke FEELM teknụzụ bidoro na mbido 2018, anyị na-achịkọta nzaghachi site na iri puku kwuru iri puku ndị ọrụ njedebe. Dabere na nyocha na nyocha nke ọtụtụ, anyị na-achọpụta na ha na-ahọrọ pods nke FEELM seramiiki coils na-ebugharị na ngwaahịa ndị ọzọ na-ekpo ọkụ, karịchaa na akụkụ gbasara uto dịka ire ụtọ, ịmịpụ mmiri, ntinye nicotine na arụmọrụ.
Part 2 Gịnị ka ha kwuru?
Nzaghachi site na iri puku kwuru iri puku ndị na-azụ ahịa na-egosi na uru kasịnụ nke ngwaahịa nwere FEELM n'ime bụ ezigbo ụtọ. Ebe ihe nzuzo zoro ezo nke nnukwu uto dị na FEELM Ceramic Coil.
Nkebi nke 3 Nzuzo di uku
Heating technology na-eme ka ndụ anyị ka mma na FEELM na-eme ka vaping ụtọ ka mma.
Taa, FEELM na-akọwapụta teknụzụ kpo oku, na-ejikọ na teknụzụ na-enweghị oke ma keta mmụọ nke amamihe. Site na eriri igwe mbu rue ijeri, FEELM kwekọrọ na ogo dị elu, na-ebute ahụmịhe ọhụụ pụrụ iche na ụwa niile.
FEELM Ceramic Coil, Nzuzo na Nnukwu Ire.
Anyi Anyi Akwụsịghi Inyocha Ihe Nzuzo Zoro Ezo.
Okingụ Sịga Ọzọ, E Liquid Alụlụụ Sịga, Newport E sịga, Kpoo Sịga, E Sịga ọnya Pack, Epen,